YEYINTNGE(ကနဒေါ): Friday, February 03
Thu Ka facebook
BY YeYint Nge ... 2/03/20122comment
(ဒေါင်းသူရဲကောင်းနှင့် အာဇာနည် ညီနောင်အားလုံး) သူတို့တွေဟာလေ... စွယ်တော်လာခဲ့တုန်းကလဲ သူတို့မဖူးခဲ့ရဘူး...
The Street ဆိုတဲ့နေရာလဲ သူတို့မရောက်ဖူးဘူး.. ...
အသစ်ဖွင့်တဲ့ GTR Club လဲသူတို့မဝင်ဖူးခဲ့ဘူး..
နေပြည်တော်က ရေပန်းဥယျာဉ်ကြီးနဲ့ ပင်ဂွင်းငှက်တွေလဲ မကြည့်ဖူးခဲ့ကျဘူး..
ဘယ်သူတွေ အန်တီစုနဲ့ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီး ဘန်းပြနေလဲ သူတို့မတွေ့လိုက်ခဲ့ရဘူး.
Facebook က Timeline တွေအကြောင်းလဲသူတို့မစဉ်းစားမိကျဘူး.
DJ Bar ကိုလာနေကျ သူဌေးသားတွေအကြောင်းလဲ သူတို့မသိခဲ့ကျဘူး...
Vampire Dairies နဲ့Twilight က သွေးစုတ်ဖုတ်အကောင်နဲ့ ကောင်မ ချောချော တွေအကြောင်းလဲသူတို့မသိခဲ့ကျဘူး..
၂၀၁၁ မှာပေါက်သွားတဲ့ Angry Birds တွေကိုလဲ iPad တွေ iPhone တွေနဲ့ သူတို့မဆော့လိုက်ခဲ့ရဘူး..
Android တွေရောင်းကောင်းနေတာလဲ သူတို့မသိလိုက်ကျပြန်ဘူး..
Sport Bar ကဝက်ဂုတ်သားကင်သုတ်လဲသူတို့မစားခဲ့ရဘူး..
ပိုက်ဆံရှိတဲ့ တချို့ တချို့တွေ မင်္ဂလာ ၇ခါဆောင်တာလဲ သူတို့မတက်ခဲ့ရဘူး..
Shuffling ဆိုတာဝေလာဝေး LMFAO ဆိုတာ အတိုကောက်စကားလုံးလား သီချင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့ လားဆိုတာတောင် သူတို့မသိကျဘူး..
Mojo ဆိုတဲ့ဆိုင်ကလေးနဲ့ Frolick က ရေခဲမုန့်တွေလဲ သူတို့မစားဖူးကျဘူး...
Steve Job ကြီးသေတုန်းကလဲ သူများတွေကိုဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်းတွေ သူတို့ပေါ်ပင်လုပ်ပြီးမရေးခဲ့ရဘူး..
Hotel တွေနဲ့ ခန်းမကြီးတွေမှာ ခဏခဏလုပ်တဲ့ Fashion ပွဲကြီးတွေလဲ ကားအကောင်းစားတွေစီးပြီးသူတို့မတက်ခဲ့ရဘူး..
New Year Eve တုန်းက မီးရှူးမီးပန်းတွေလဲ နဲ့ SKY Net တွေ , ဘာတွေညာတွေသူတို့မကြည့်ခဲ့ရဘူး.. အစိုးရကအခု ပေးသွင်းတဲ့ Model မြင့် ကားတွေလဲ မစီးခဲ့ကျရဘူး..
အခု ဒီစာကိုဖတ်နေရင်းနဲ့လဲ Like လုပ်ရကောင်းမှန်း သူတို့ သိမှာမဟုတ်ဘူး... ဒါပေမယ့် ... သူတို့ (...)ခဲ့တာ တခုပဲ ရှိတယ်.. " တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ " တဲ့..။
Yeyint Kyaw facebook
BY YeYint Nge ... 2/03/20120comment
လျှပ်စစ်မီတာအသုံးပြုခများ စတင် တိုးမြှင့်ကောက်ခံတော့မည်
by Myit Makha Mediagroup on3Feb, 2012
၂၀၁၂ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလမှစတင်၍လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးဆွဲခများ၊လျှပ်စစ်မီတာအသုံးပြုခများအား အိမ်သုံးမီတာတစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ် ၃၅ သို့လည်းကောင်း၊လုပ်ငန်းသုံးမီတာ တစ်ယူနစ်လျှင် ၇၅ ကျပ်သို့တိုးမြှင့်ကောက်ခံတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဓာတ်အားသုံးစွဲခတိုးမြှင့်ကောက်ခံလာရခြင်းမှာ အမှတ် (၂) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အရှုံးကာမိစေရန်နှင့် မီးမရရှိသော ဒေသများသို့ မီးရရှိရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တိုးမြှင့် ကောက်ခံခြင်းဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောပြချက်အရသိရှိရသည်။
“အခုပြောနေတာ မီတာခတိုးကောက်ပြီး မီးမရသေးတဲ့ နယ်တွေကိုမီးပေးနိုင်ဖို့အတွက် တိုးကောက်တာလို့ ပြောတာပဲ၊ မီးမရသေးတဲ့ မြို့ကြီး ရွာကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်” ဟု ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ၄၃ ရပ်ကွက်နေ ဦးသိန်းဝင်း ကပြောသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၁ရက်နေ့မှစတင်၍ အိမ်သုံးမီတာတစ်ယူနစ်လျှင် အသုံးပြုခ ၃၅ ကျပ်သို့လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းသုံး (ပါဝါမီတာ) မီတာတစ်ယူနစ်လျှင် အသုံးပြုခ ၇၅ကျပ်သို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“အိမ်သုံးပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းသုံးပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးကောက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့်မီးမမှန်လည်း မထူးပါဘူး။ မီးမှန်မယ်ဆိုရင်တော့ မီးစက်သုံးစွဲခကို မီတာခထဲ တိုးပေးလိုက်သလိုပါပဲ”ဟု လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုပ်ငန်းသုံး (ပါဝါမီတာ)မီတာ သုံးစွဲ တစ်ဦးကပြောသည်။
မီတာသုံးစွဲခများကို၂၀၀၆ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်အိမ်သုံးမီတာတစ်ယူနစ်လျှင် အသုံးပြုခ ၂၅ ကျပ်ကောက်ခံ ခဲ့ပြီး၊ လုပ်ငန်းသုံး (ပါဝါမီတာ) မီတာ တစ်ယူနစ်လျှင် အသုံးပြုခ ၅၀ကျပ်ဖြင့်ကောက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
“မီးသုံးဖို့ပါပိုရှာနေရတယ်။အရင်လကပုံမှန်တစ်လကို၁၀၀၀-၁၅၀၀ လောက်ပဲပေးရတယ်။အခုလဆိုရင်၂၅၀၀-၃၀၀၀ကျပ် လောက်ဆောင်ရမယ်ထင်တယ်။”ဟု ဒေါ်ဝထုတ်ကပြောသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ခွင့် အမေရိကန်တောင်းဆို
Published on February 3, 2012 by ပီတာအောင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွတ်လပ်မျှတမှု ရှိ မရှိ နိုင်ငံတကာ​ ​လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကို​ ​စောင့်ကြည့်ခွင့်ပေးဖို့​ ​မြန်မာအစိုးရကို အမရိကန်ပြည်ထောင်စုက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး မိုက်ကယ်ပေါ့စ်နာက ၀ါရှင်တန်မှာ အမေရိကန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ​ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ NED က ကျင်းပတဲ့ အလုပ်ရုံ ​ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တာပါ။
မိုက်ကယ်ပေါ့စ်နာက​ ​ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံတကာကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ​ ​မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတဲ့​ ​အ​ကြောင်းနဲ့​ ​ပြည်တွင်းက​ ​စောင့်ကြည့်​ ​လေ့လာသူတွေကိုရော​​ ​ပြင်ပနိုင်ငံတွေက​ ​ရွေးကောက်ပွဲ​ ​စောင့်ကြည့်​ ​လေ့လာသူတွေအတွက်ပါ​ ​လမ်းဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ​ ​အရမ်းကို မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလဒ်ဟာ စစ်တပ်ကြီးစိုးတဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့ ချိန်ခွင်လျှာကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒါဟာ လာမယ့် ၂၀၁၅ မှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲသစ်ဆီ ဦးတည်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး လမ်းပေါက်သွားမယ်လို့လည်း အမေရိကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
လွှတ်တော် အသီးသီးမှာ လစ်လပ်နေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာ ၄၈ နေရာအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာမယ့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းမယ်လို့ မြန်မာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာထားတာပါ။
မကြာခင်က မြန်မာနိုင်ငံ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းကတော့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်တရားမျှတမှု ရှိရင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ် အရေးယူထားမှုတွေ ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ ပြဿနာ မရှိနိုင်ဘူးလို့လည်း ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ (ANFREL) ခေါ် လွတ်လပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲများဆိုင်ရာ အာရှကွန်ရက်အဖွဲ့ကတော့ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲကို စောင့်ကြည့်ဖို့ အမေရိကန်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို သဘောတူတဲ့အကြောင်း ဒါပေမယ့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုင်ငံတကာလေ့လာသူတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တရားဝင် ကြိုဆိုမယ့် လက္ခဏာ မတွေ့ရသေးဘူးလို့ ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ANFREL ရဲ့ အမှုဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး မစ္စက်စွမ်ဆရီဟာနန်အန်တစွခ်က “မြန်မာအုပ်ချူပ်ရေး တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေနဲ့ သံတမန်တွေ အပါအ၀င် စောင့်ကြည့်သူတွေကို ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အရင်က ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ဆက်သွယ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် တုံ့ပြန်တာမရှိပါဘူး။ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်မှု ရှိသလဲ သွားကြည့်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့ပြင် မဲဆွယ်မှုတွေအတွက်၊ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း၊ မွန်နဲ့ကချင်တို့လို လူနည်းစုတွေအတွက် အစိုးရက ဘယ်လောက်လမ်းဖွင့် ပေးထားတယ်ဆိုတာ ကြည့်ချင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ဒီတခေါက်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်လို့ သူဘယ်လောက် လွတ်လပ်ခွင့်ရလဲဆိုတာလည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်နေမှာပါလို့ANFREL အဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ လေ့လာသူတွေကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုဖို့ ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက တောင်းဆိုခဲ့ဖူးပေမယ့် မြန်မာအစိုးရက ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို ရှမ်းပြည်သားတို့ အလေးပြုမည်
ကျော်ခ | သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၄ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ၆၅ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လုံမြို့ရှိ ‘ပြည်မတောင်တန်း ပူးပေါင်းရေးစာချုပ် ကျောက်တိုင်’ အား ဒေသခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အဖွဲ့ဝင်များက ဦးဆောင်ကာ သွားရောက် အလေးပြုကြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်ပေါင်း ၂၃ နှစ်တိုင် အလေးပြုခွင့်မရခဲ့သော အဆိုပါ ကျောက်တိုင်ကို ပင်လုံ၊ လဲချား၊ လွိုင်လင်၊ နမ့်စန်မြို့များရှိ NLD အဖွဲ့ဝင်များက ဦးဆောင်ကာ ဒေသခံများနှင့်အတူ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် အလေးပြုခြင်း ပြုလုပ်ကြ မှာ ဖြစ်သည်။
၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးအခင်းနောက် ၁၉၈၉ နှစ်တွင်သာ နောက်ဆုံး အလေးပြုခွင့်ရခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ NLD အဖွဲ့များ
ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ပြည်ထောင်စုအခြေခံ ပင်လုံ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ပင်လုံ ကျောက်တိုင် စိုက်ထူခဲ့ပုံကို မျိုးဆက်သစ်တို့ သိရှိရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း တောင်ကြီးမြို့နယ် NLD အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်မိုးမိုး က ပြောသည်။
၆၅ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ပင်လုံမြို့ရှိ ‘ပြည်မတောင်တန်း ပူးပေါင်းရေးစာချုပ် ကျောက်တိုင်’ အား ဒေသခံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အဖွဲ့ဝင်များက ဦးဆောင်ကာ သွားရောက် အလေးပြုကြမည် (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ) ...
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ပြန်ထွက်လာပြီးကတည်းက ၂၁ ရာစု ပင်လုံကို ဦးတည်ထားတယ်လေး။ အရင်က ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဦးဆောင်ပြီးတော့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး လုပ်ခဲ့တာတွေ။ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ တာ၊ ပင်လုံကျောက်တိုင် စိုက်ထူခဲ့တာတွေကို မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ သမိုင်းကိုမမေ့စေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ကြမှာပါပဲ” ဟု ဒေါ်ခင်မိုးမိုး က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ထိုသို့ သွားရောက်အလေးပြုရန်အတွက် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၇ ရက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့တွင် NLD အဖွဲ့ဝင်များ စုပေါင်း တွေ့ဆုံ
ဆွေးနွေးပြီး ဒေသခံ အစိုးရအာဏာပိုင်များထံ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံသွားမည် ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ ဒေသတွင်းပါတီများဖြစ်ကြသည့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီနှင့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ခေါ် ကျားဖြူပါတီ တို့လည်း သွားရောက် အလေးပြုရန်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကမူ ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမပြုရသေးကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“ပြည်မတောင်တန်း ပူးပေါင်းရေးစာချုပ် ကျောက်တိုင်” ကို ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် လွတ်လပ်ရေးနေ့က လွိုင်လင်နှင့် နမ့်စန် NLD အဖွဲ့ဝင်များက ဦးဆောင်ကာ လူဦးရေ ၅ဝ ကျော်ဖြင့် သွားရောက် အလေးပြုခဲ့ကြပြီး အာဏာပိုင်များက တားဆီးနှောက်ယှက်ခြင်းများ မရှိခဲ့ဟု လွိုင်လင် NLD အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်မီးမီး က ပြောသည်။
“၈၉ နောက်ပိုင်းမှာ ကျောက်တိုင်ကို သွားအလေးပြုရင် အာဏာပိုင်တွေက လိုက်စောင့်ကြည့်တာ၊ နှောင့်ယှက် တာတွေ၊ တားမြစ် မှုတွေ ရှိတော့ နောက်ပိုင်း ဘယ်သူမှ မသွားရဲတဲ့အနေအထား ဖြစ်သွားတာပေါ့။ လွတ်လပ်ရေးနေ့က သွားတော့ ဘာအနှောက်ယှက် အတားဆီးမှ မရှိတော့ဘူး” ဟု ဒေါ်မီးမီး က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ပင်လုံစာချုပ်သည် ဖဆပလ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း ခေါင်းဆောင်များ လွတ်လပ်ရေး ကို တောင်းတန်း/ ပြည်မ မခွဲခြားဘဲ အတူရယူရန် ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လုံမြို့၌ ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီး အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် “ပြည်မတောင်တန်း ပူးပေါင်းရေးစာချုပ် ကျောက်တိုင်” ကို စိုက်ထူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်လာတာ ပင်လုံစာချုပ်က အဓိကပဲ ပင်လုံ စာချုပ်ချုပ်ဆိုလို့ပဲ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာတာ
ဖြစ်တယ်။ ကချင်ပြည်ထောင်၊ ရှမ်းပြည်ထောင် စသဖြင့် အဲလိုပြည်ထောင်တွေကို စုထားတော့ ပြည်ထောင်စုလို့
ခေါ်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စုနေ့က မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက် အရေးပါတယ်” KIO ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ အမြဲတမ်း ဗဟို ကော်မတီဝင် လမာဂွမ်ဖန်း က ပြောသည်။
ပင်လုံစာချုပ်တွင် "တောင်တန်းဒေသများအတွက် နယ်တွင်း အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အပြည့်အဝ ရှိကြောင်း မူအားဖြင့် လက်ခံသည်" "တောင်တန်းဒေသရှိ ပြည်သူတို့သည် ဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်များတွင် အခြေခံများ အခွင့်အရေးများနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိခံစားစေရမည်" ဟု စာချုပ်၌ ပါရှိသည်။
“ပြည်ထောင်စုတည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးဆိုတဲ့ အဓိက စကားရပ်ကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ အချင်းချင်းကြားမှာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးတွေ အများကြီး ကြိုးပမ်းသွားရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲလိုလုပ်နိုင်မှ သာယာဝပြောတဲ့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ထွန်းလာမယ် လို့မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု လမာဂွမ်ဖန်း က ပြောသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့က စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့တွင် ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ကရက် က အမျိုးသား
ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် 'ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ' ခေါ်ယူရေး အဆိုပြုခဲ့ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် ၎င်းအဆိုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ လွှဲပြောင်းတာဝန်ပေးခဲ့သည်။
“ကျုပ်ပါးစပ် လွတ်လပ်ရေးရပြီ” ဟု ရွှေညဝါ ဆရာတော်မိန့်
မျိုးသန့် | သောကြာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၀၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၇ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ထားခြင်းကာလ ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်၍ မိမိပါးစပ် လွတ်လပ်တော့ မည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ သာဓုကျောင်းတိုက်မှ ရွှေညဝါဆရာတော်က မိန့်ကြားလိုက်သည်။
ရွှေညဝါဆရာတော်သည် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှစ၍ တနှစ်တိတိ တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရာမှ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှု ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်၍ တရားဟောပုလ္လင်ပေါ်တွင် ပထမဆုံး မိန့်ကြားချင်သည့် စကားနှင့် ပတ်သက်၍ "ကျုပ် ပထမဆုံး ပြောချင်တဲ့စကားကတော့ ကျုပ်ပါးစပ် လွတ်လပ်ရေးရပြီ လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့" ဟု မဇ္ဈိမကို ဆရာတော်က အမိန့်ရှိသည်။
ရွှေညဝါဆရာတော်သည် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အတွက် တရားဦးကို တာချီလိတ်မြို့တွင် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁၊ ၁၂ ရက်နေ့များတွင်
ဟောကြားမည်ဖြစ်ပြီး ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ရက်နေ့များတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ခင်ဦးမြို့တို့တွင် ဟောကြားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ရန်ကုန်အပါအဝင် နယ်မြို့များတွင်လည်း လှည့်လှည်ဟောကြားမည်ဟု သိရသည်။
ဆရာတော်သည် တရားပွဲများအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မသက်ဆိုင်သော အသုံးအနှုန်းများကို ထည့်သွင်း ဟောပြော သည်ဟူသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် သံဃာ့နာယက မဟာနာယက (မဟန) မှ တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆရာတော်က "ကျုပ်တို့ ဘုရားရှင် ဟောထားတဲ့ ပါဋ္ဌိတော်တွေ အဲဒီပါဋ္ဌိတော်တွေကို ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ အဋ္ဌကထာတွေ အဲဒီထဲကအတိုင်းပဲ ဟောမှာပဲ။ ပါတဲ့အတိုင်းပဲ ဟောမှာပဲ" ဟုလည်း မဇ္ဈိမကို အမိန့်ရှိသည်။
မဟန ၏ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကာလ ၂ဝ၁၁ စက်တင်ဘာလအတွင်း မန္တလေး အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနေ့တွင် တရားဟောသည်ဟူသည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဆရာတော်
ကျောင်းထိုင် သီတင်းသုံးရာ သာဓု ပရိယတ္တိ ကျောင်းတိုက်မှ ဖယ်ရှားရန်နှင့် ကျောင်းတိုက်တွင်း မည်သည့် သင်တန်းမှ မပြုလုပ်ရန် မဟန မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က စာပေးပို့ ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် သာဓု ပရိယတ္တိ ကျောင်းတိုက်မှ ဖေဖေါ်ဝါရီလလ ၁၉ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ထွက်ခွာပေးရန်လည်း မဟန ထံ ကတိပြုလက်မှတ် ရေးထိုးထားရသည်။
ရွှေညဝါဆရာတော်၏ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်နှင့် အလားတူပင် ရန်ကုန်တိုင်း မှော်ဘီ မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်မှ ဓမ္မကထိက ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်) ကိုလည်း မဟန မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သေးသည်။
ထို့အပြင် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေးအခင်းကြောင့် ထောင်ကျခံခဲ့ရပြီး ဇန်နဝါရီလအတွင်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသည့် ဆရာတော်များကို မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ ပေါက်စေတီကျောင်းတိုက်တွင် သိက္ခာ ထပ်ရန်နှင့် လွတ်မြောက်လာသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုကိုလည်း မဟန မှ ကြာသာပတေးနေ့တွင် တားမြစ်လိုက်သည်။
သံဃာတော် ၃၈ ပါးကို ပင့်ဖိတ်ကာ သိက္ခာထပ်ရန်နှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုများကို လှူဒါန်းရန် စနေနေ့တွင် ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်စာ ၁၅ဝဝ ခန့် ဖိတ်ကြားထားပြီးမှ မဟန မှ ပိတ်ပင်မှုကြောင့် အစီအစဉ် ပျက်သွားသည်ဟု ကမကထလုပ် စီစဉ်သူ
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ဦးကိုကိုလေးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
"တိုင်းသံဃာ့ နာယက က လှမ်းပြီးပိတ်တယ်။ ကျောင်းမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပွဲ လုပ်လို့ မရတော့ဘူးပေါ့။ ကျနော်တို့ လုပ်ခွင့်မရတော့ဘူး" ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထောင်ကျခံရာမှ ပြန်လွတ်လာသည့် ဆရာတော်များမှာ မဂ္ဂင်ဆရာတော်ကြီးနှင့် ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု
ခေါင်းဆောင် ဦးဂမ္ဘီရတို့ အပါအဝင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ငွေကြာယံကျောင်းတိုက်၊ မင်္ဂလာဒုံကျောင်းတိုက်တို့မှ ဆရာတော်များ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ပခုက္ကူ၊ ဖျာပုံ၊ မြင်းခြံ၊ မုဒုံမြို့များမှ ဆရာတော်များကိုလည်း ပင့်ဖိတ်ထားသည်ဟု ဦးကိုကိုလေးက ပြောသည်။
နယ်မြို့များမှ ဆရာတော်အချို့လည်း အဆိုပါ ပွဲသို့ကြွရောက်ရန် ရန်ကုန်မြို့ ကျောင်းတိုက်များတွင် ယာယီသီတင်းသုံး
နေပြီဖြစ်ပြီး စနေနေ့နံနက်တွင် ဆရာတော် တပါးချင်းဆီသို့ သွားရောက်ကာ လှူဖွယ်ဝတ္ထုများ လှူဒါန်းရန်ရှိသည်ဟု အဆိုပါ အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေးတွင် ပါဝင်သည့် ကိုညီညီထွန်းက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
အထက်ပါ ဖြစ်စဉ်များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင် နေသည်ဟု ဆိုသော်လည်း နှေးကွေးလွန်းသည်ကို "ကျနော်တို့ကို လျှောက်ခွင့်ပြုတဲ့ လမ်းလေးက ဝါးလုံးတံတားလေး လောက်ပဲ
ပေါ့ဗျာ၊ ခနော်ခနဲ့နဲ့ ဝါးလုံးတလုံးထဲနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ တံတားလေးကို ကျနော်တို့ ဖြည်းဖြည်းလျှောက်နေရတဲ့ သဘော
ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ကို လမ်းမပေးသေးဘူး" ဟု နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးကိုကိုလေးက ညွှန်းဆို ပြောပြ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်ရန်တို့အတွက် ကြိုးပမ်းဖေါ်ဆောင်နေပြီး
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရန် မရှိဟု ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက အယ်လ်ဂျာဇီးယား သတင်းဌာနကို ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းက ပြောကြားခဲ့သေးသည်။
စနေ, 04 ဖေဖော်ဝါရီ 2012
KIO (Kachin Independence Organization) ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ နေပြည်တော်အစိုးရတို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့က စတင်တိုက်ခိုက်ကြတာမို့ အခုဆိုရင် (၈) လနီးပါး ရှိနေပါပြီ။ (၁၇) နှစ်လောက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပြီးမှ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြတာမို့ နိုင်ငံရေးအရ အဖြေမရှာနိုင်ရင် အပစ်အခတ်ရပ်ရေးဟာ အချည်းနှီးဖြစ်နေကြောင်း ကချင်ပြဿနာက သက်သေပြနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေး မပြေလည်လို့ စစ်ပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာနိုင်ရင် ပစ်ခတ်မှုတွေ လျှော့နည်းလာပြီး ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့ KIO က မြင်ပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ ဇန်နဝါရီလ (၁၈) နဲ့ (၁၉) ရက်နေ့က ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီပြည်နယ် ရွှေလီမြို့ မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပေမယ့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ မလုပ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရွှေလီဆွေးနွေးပွဲကို အောင်မြင်မှုလို့ နှစ်ဘက်စလုံးက ယူဆကြပုံ ရပါတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အဓိက ရှေ့ တန်းတင်မထားဘဲ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကို ဆက်လုပ်နိုင်ရင် တိုက်ပွဲတွေရပ်စဲသွားနိုင်တယ်လို့ ကေအိုင်အို ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွမ်မော် က ဒီဗွီဘီ ရေဒီယိုနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
သတင်းအကြောင်းအရာကို ဖော်ပြလေ့မရှိတဲ့ အစိုးရသတင်းစာတွေကလည်း အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အို ထုတ်ပြန်တဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်ကို ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်နေ့က ဖော်ပြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွှေလီဆွေးနွေးပွဲကို အောင်ပွဲအဖြစ် ဦးအောင်သောင်း တို့ဘက်ကလည်း သတ်မှတ်ထားပုံ ရပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး၊ စစ်ရေးအရှိန်အဟုန် ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကို အမှန်အတိုင်း သတင်းထုတ်ပြန်ရေး စတဲ့အချက်တွေကို သဘောတူကြတယ်လို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ စစ်မက်အရှိန်လျှော့ချနိုင်ရေး နဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဆက်လက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူနိုင်ကြတာကို ရွှေလီအစည်းအဝေးရဲ့  ထင်ရှားတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာအဖြစ် မှတ်ယူထားတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ စစ်မက်အရှိန်အဟုန် ကျဆင်းရေးမှာ နှစ်ဘက်က တပ်တွေနေရာချထားရေးကို မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက် ကေအိုင်အိုအနေနဲ့ အစိုးရတပ်ရဲ့  လှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်ရမယ့်လို့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးလနန် က ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ အစိုးရ ထိုးစစ်ရပ်ဆိုင်းဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာနဲ့ ဇန်နဝါရီလမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ညွှန်ကြားခဲ့ပေမယ့် အစိုးရတပ်က ဆက်လက်ပစ်ခတ်နေပါတယ်။ ရွှေလီဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့ ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ ရွှေဓါတ်ငွေ့နဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းမယ့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ကချင်တပ်ရင်း (၈) ကို အစိုးရတပ်က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ကလည်း ဝိုင်းမော်မြို့ နယ် စာမရွာအနီးမှာ အစိုးရတပ်က ခြုံခိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် ကချင်စစ်ဗိုလ်တဦးကျဆုံးကြောင်း ကချင်သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။
(၁၆) နှစ် အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ပြီးမှ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လကစပြီး ပြန်လည်ပစ်ခတ်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ။ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်နဲ့ ဦးအောင်သောင်းအဖွဲ့ ဇန်နဝါရီ (၂၈) ရက်နေ့က ပဏာမ သဘောတူချက် ရယူနိုင်တာကို အစိုးရသတင်းစာတွေမှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြပါတယ်။ အစိုးရတပ်နဲ့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး ရှမ်းတပ်ဖွဲ့တွေ ဖြန့်ထားတဲ့နေရာကို အစိုးရက သဘောတူပါတယ်။ ဆက်ဆံရေးစခန်းဖွင့်ရေး၊ သွားရေးလာရေး၊ နယ်မြေအေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရှမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အခြေတကျ လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရေး၊ သွားရေးလာရေး၊ နယ်မြေအေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရှမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အခြေတကျလုပ်ကိုင် စားသောက်နိုင်ရေး နဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး၊ နယ်မြေအေးချမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ရှမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အခြေတကျ လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရေး နဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး စတာတွေကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူကြတယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး၊ အချုပ်အခြာ အာဏာတည်မြဲရေး စတဲ့ အရေး (၃) ပါးကို ပင်လုံစိတ်ဓါတ်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ သဘောတူကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထူးခြားတာက ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့က ကေအိုင်အိုနဲ့ ဆွေးနွေးတုန်းကတော့ ပင်လုံဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ဦးအောင်သောင်း တို့ဘက်က လိုလိုလားလား မရှိဘူးလို့ ကေအိုင်အို ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးလနန် က ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။ ပင်လုံကို အစိုးရဘက်က မသုံးချင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ကချင်အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးစဉ်က ပင်လုံကို မသုံးဖို့ ရှောင်ရှားခဲ့တဲ့ ဦးအောင်သောင်းတို့အဖွဲ့ဟာ ရှမ်းအဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ပင်လုံစိတ်ဓါတ်နဲ့ ဒို့တာဝန်အရေး (၃) ပါးကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သဘောတူကြောင်း အတိအလင်း ဖော်ပြပါတယ်။ နိုင်ငံရေး စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဝေါဟာရအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပုံ ကွဲပြားခြားနားနေတာကို အရင်ဆုံး ညှိနှိုင်းဖို့လိုကြောင်း ပြသနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့က ကေအန်ယူ နဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ဖေဖေါ်ဝါရီလဆန်းက မွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ ပဏာမ သဘောတူချက် ရယူနိုင်တဲ့အတွက် ရှေ့ ကပြေးနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရသတင်း မီဒီယာမှာ ဦးအောင်မင်း အဖွဲ့ ရယူလိုက်တဲ့ ကေအန်ယူ သဘောတူချက်ပါ အကြောင်းအရာမဖော်ပြဘဲ ဦးအောင်သောင်းအဖွဲ့က ကချင်နဲ့ ရှမ်းအဖွဲ့တို့နဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် သတင်းဖြန့်ချီရေးမှာတော့ ဦးအောင်သောင်းတို့အဖွဲ့က တပန်းသာသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရောက်မယ့်နေ့ ပုသိမ်တက္ကသိုလ် မဖြေမနေရစာမေးပွဲ စစ်မည်
သောကြာ, 03 ဖေဖော်ဝါရီ 2012
လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့ကျရင် ပုသိမ်တက္ကသိုလ်မှာ Pre Exam ဆိုပြီး စာမေးပွဲ စစ်မယ်လို့ ရုတ်တရက် ကြေညာလိုက်တဲ့အတွက် ပုသိမ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အဲဒီ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာပဲ ပုသိမ်မြို့ကို ပါတီစည်းရုံးရေးအဖြစ် လာမယ့်ရက်မှာ အခုလို စာမေးပွဲ စစ်မယ်လို့ ကြေညာလိုက်တာကြောင့် ဖြစ်သလို ပုသိမ်နဲ့ မြောင်းမြမြို့တွေမှာလည်း လူထုနဲ့ စကားပြောဖို့ အတွက် နေရာအခက်အခဲတချို့ ကြုံနေရတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပါတီစည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်အဖြစ် ပုသိမ်နဲ့ မြောင်းမြမြို့တွေကို ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့မှာ သွားဖို့ စီစဉ်ထားပြီး အဲဒီနေ့မှာပဲ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်မှာ Pre Exam ဆိုတဲ့ စာမေးပွဲကို စစ်မယ်လို့ ဖော်ဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုစာမေးပွဲမျိုး ပုသိမ်တက္ကသိုလ်မှာ တခါမှမရှိခဲ့ဖူးသလို ဒီစာမေးပွဲကို မဖြေရင် မတ်လမှာကျင်းပမယ့်် Fial Exam ကိုလည်း ဖြေဆိုခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့ စည်းကမ်း တင်းကျပ်မှုလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ပုသိမ်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ ဆိုပြီး ဆရာဆရာမတွေက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အသိပေးတာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားအများစုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုသိမ်ကိုလာမယ့်အတွက် လူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကို မသွားစေချင်တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပြီး မကျေမနပ် ဖြစ်နေကြတယ်လို့ ပုသိမ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“အခု တစ်ရက် နှစ်ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်အစ်မ၊ အဲဒီလိုပြောတာလေ။ ပါမောက္ခတွေက ပြောတာ။ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်နေ့ကို၊ ၆ ရက်နေ့ကို ဧရာဝတီတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် လာမယ်တဲ့။ ၇ ရက်နေ့ကျရင် ၈ နာရီခွဲကနေ ညနေ သူတို့ပြီးတဲ့အထိပေါ့နော် စာမေးပွဲ စစ်မယ်တဲ့။”
“၇ ရက်နေ့ကျတော့ စာမေးပွဲရှိတယ်တဲ့။ အဲဒါ ၈ နာရီအရောက်တဲ့ ကျောင်းကို။ ၈ နာရီခွဲကနေ စ စစ်မှာ။ တကယ်လို့ ဒီ စာမေးပွဲကြီးကို မဖြေရင် စာမေးပွဲ တကယ် အစစ်ကြီးကျရင် ဖြေဆိုခွင့်မရှိဘူး။ စာမေးပွဲ အစစ်ကြီးက ၃ လပိုင်းထဲမှာ။ ကျနော်တို့က အဲဒါသွားမှာစိုးလို့ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပွဲ သွားမှာစိုးလို့) လုပ်တာလားပေါ့။ ကျောင်းသားတွေကတော့ အဲဒါ မရှိရင်တော့ သွားကြမှာ။ နည်းနည်းတော့ ကသိကအောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။”
ပုသိမ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့မှာပဲ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်း ကျောင်းတွေမှာ ပြည်ထောင်စုနေ့ အတွက် ကဗျာရွတ်ဆိုပွဲနဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ ကျင်းပနိုင်ဖို့ ကျောင်းသားမိဘ အစည်းအဝေးအဖြစ် ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ မိဘ တစ်ဦးစီ မဖြစ်မနေလာဖို့ ကျောင်းတွေက ဖိတ်ထားတာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူထုကို စကားပြောဖို့ မူလကစီစဉ်ထားတဲ့ မြို့လယ်က ကျောက်တိုင်ကွင်းကနေ အခု မြို့ပြင်ကကွင်းကို ပြောင်းဖို့ စီစဉ်လိုက်ရတယ်လို့ ပုသိမ် NLD ပါတီရဲ့ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးအောင်တင်ဦးက ပြောပါတယ်။
“စာမကျသေးခင်မှာ ကျောက်တိုင်ကွင်း ဆိုပြီးတော့ သဘောတူညီချက် ရထားတာပေါ့နော်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲဒီမှာ ကန့်ကွက်တာရှိတယ်ပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ ကော်မရှင်သစ်ကနေပြီးတော့ ချထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ ကျောင်းနားတို့၊ ဆေးရုံနားတို့၊ အစိုးရဌာနကြီးကြီးတို့ နားမှာ ဟောပြောပွဲ မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ သူတို့ ပြန်ပြီးတော့ ပြောပြတယ်။ အဲဒါကြောင့်မိုလို့ ကိုးသိန်းကွင်းကိုပြောင်းရင် ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ အခက်အခဲကတော့ ကျနော်တို့ မြို့လယ်မဟုတ်တဲ့အတွက် နည်းနည်းတော့ သွားရလာရတာ ဝေးသွားတာပေါ့။”
ဒီလို အခြေအနေတွေကြောင့် ပုသိမ်လူထုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာမယ့်ခရီးစဉ်ကို ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတာတွေ NLD ရုံးကို အစီအစဉ် မေးမြန်းစုံစမ်းတာတွေ ပိုများလာနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ မေးလာကြတဲ့သူတွေက ကျောက်တိုင်ကွင်းလား၊ ကိုးသိန်းကွင်းလား ပေါ့။ ဖြစ်သလား မဖြစ်ဘူးလားပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ လူထုကလည်း ဒီလိုလုပ်မှ ငါတို့ ပိုလာမယ်ကွာ ဆိုပြီးတော့ မနက် ၆ နာရီကတည်းက စစောင့်ကြမယ်ပေါ့။ နောက် တောဘက်ကလည်း ရေလမ်းကြောင်းတွေ ပိတ်ချင်ပိတ်မှာ ဆိုပြီးတော့ တစ်ရက် ကြိုလာမယ် ဆိုပြီး အသိပေးကြတယ်။”
ပုသိမ် NLD ပါတီရဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအောင်တင်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပုသိမ်ကအပြန် မြောင်းမြမြို့ကို ၀င်ပြီး လူထုကိုစကားပြောမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ နေရာစီစဉ်ရာမှာလည်း အခက်အခဲ ရှိနေတဲ့အကြောင်း မြောင်းမြ NLD ပါတီရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းဆွေက ပြောပါတယ်။
“မြို့မ အားကစားကွင်းမှာ ကျနော်တို့က လူထု အစည်းအဝေးပွဲ လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့က ခရိုင်ကော်မရှင်ကို တင်ပြတဲ့အခါကျတော့ ခရိုင် ကော်မရှင်က မြို့မ အားကစားကွင်းကို ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ ဘာကြောင့် ခွင့်မပေးနိုင်တာလဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ မြို့မ ဘောလုံးကွင်းက အရှေ့နဲ့အနောက် ဂိုးတိုင်နှစ်တိုင် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီ ဂိုးတိုင်နှစ်တိုင်ကို တောင်နဲ့မြောက် ပြန်ပြောင်းမယ်၊ ဘောလုံးကွင်းကို ပြင်မယ်တဲ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားပွဲကို ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ ခရိုင်ကော်မရှင်က အကြောင်းပြန်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျနော်တို့က ကျနော်တို့ မြောင်းမြမြို့မှာ နေရှင်နယ်ကျောင်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ နေရှင်နယ်ကျောင်းက ပိုင်တဲ့ အဲဒီကျောင်းဘေးနားက ဘောလုံးကွင်းကျယ်ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျနော်တို့က ကျင်းပချင်ပါတယ်လို့ ဒုတိယအကြိမ် ကျနော်တို့က ကော်မရှင်ကို အကြောင်းကြားပါတယ်။ တရားဝင် စာနဲ့လည်း ကြားပါတယ်။ ကော်မရှင်က ကျနော်တို့ကို ဒီနေ့အဖြေ ပေးပါမယ်ပြောပြီးတော့ အဖြေလည်း မပေးနိုင်ဘူး။ မနက်ဖြန် ၃ နာရီ ပေးပါမယ်လို့ အချိန်ဆွဲတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကော်မရှင်က ကျနော်တို့ကို တိကျတဲ့အဖြေ မပေးဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၀ရန်တာကနေပြီးတော့ အပေါ်ကနေ ထွက်ပြောရပါလိမ့်မယ်။”
မြောင်းမြ NLD ပါတီရုံး အဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းဆွေ ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နဲ့ ၅ ရက်နေ့မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မန္တလေးကို သွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ လူထုစည်းဝေးပွဲလုပ်ဖို့ နေရာအခက်အခဲတွေ ရှိနေတာကြောင့် ခရီးစဉ် ဖျက်လိုက်ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေ တွေကြောင့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့အတူ မေးခွန်းထုတ်နေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်မြေအောက်ရထား စီမံကိန်းမြေပုံ စီးပွားရေး ဈေးကစားမှု ဖြစ်နိုင်
BY YeYint Nge ... 2/03/2012 1 comment
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က နှိပ်စက်ခဲ့သော မောင်ထိပ်ကွတ်လေး.သာသနာဘောင်သို့ဝင်ရောက်ပြီ
Robina Lwin facebook
ဟင်္သာတမြို့ က ၉ နှစ်အရွယ် မိဘမဲ့ ခလေးလေး..လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှင် နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံ ရပြီးနောက်..NOBLE ပရဟိတ ဆရာတော်မှ သာသနာဘောင်သို့ သွတ်သွင်းပေးလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေ (၈၁၅) ဧက ကို ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ ဦးခင်ရွှေက စက်မှုဇုန်အပိုင်း(၄)ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လယ်သမားတွေ နွေစပါးစိုက်ပျိုးလို့မရအောင်ဟန့်တားနှောင့်ယှက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလွယ်ကူအောင် အစိုးရဘက်က ဖောက်လုပ်ထားပေးတဲ့ဆက်သွယ်ရေးရေမြောင်း ကိုးခုကိုလဲ ဇေကမ္ဘာ ကုမ္မဏီက မန်နေဂျာ ဦးမြင့်ဇော်က ပိတ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကြာအောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့လယ်သမားတွေအတွက် ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏကဂရုဏာကြေးအနေနဲ့ ငွေကျပ်သုံးသုံးစီကိုလဲပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးမတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဥက္ကဌ ဦးနေမျိုးဝေက ဦးဆောင်ပြီး လယ်သမားတွေ လယ်လုပ်ခွင့်ရရှိရေး၊ လယ်ယာမြေပြန်လည်ရရှိရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာအဖွဲ့ သီဆိုကပြဖျော်ဖြေပွဲ သတင်းဓာတ်ပုံများ
တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာအဖွဲ့ သီဆိုကပြဖျော်ဖြေပွဲ သတင်းဓာတ်ပုံများ [အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂]
HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ဖိုဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီ့းရန်ပုံငွေကျပ် ၂၀၉ သိန်းရရှိ
Feb 3, 2012 6:29am
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယအကြီးဆုံး ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီး
HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံက နာမည်ကျော် အဆိုတော် အများအပြား ပါဝင်ပြီး ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ ဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲကို ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ၂၀၀၇ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက် လာခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီပွဲမှာနာမည်ကြီးအဆိုတော် ၁၀၀ ကျော် နဲ့ နာမည်ကြီးတီးဝိုင်း ၁၅ ခုက ပါဝင်ကူညီတီးခတ်ခဲ့ကြပြီး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရေးစပ်ထားတဲ့ ကျနော့်မေရီ ဆိုတဲ့သီချင်းကို ရွေသံစဉ်အဖွဲ့နဲ့ ဘော်ဘီက သီဆိုမယ်ဆိုတာကြောင့် တက်ရောက်လာတဲ့ပွဲပရိသတ်ကြီးက အလှူငွေ ၃ သိန်းကျော် ပေးလှူခဲ့ကြသလို ကိုမြအေး အကျဉ်းကျစဉ်က ရေးစပ်ထားတဲ့ တေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ကျပ်ငွေတစ်သိန်းနဲ့ ပရိသတ်ထဲက ၀ယ်ယူသွားပါတယ်။ ဒီရန်ပုံငွေရှာပွဲမှာ ရန်ပုံငွေကျပ် ၂၀၉ သိန်းရရှိတယ် လို့သိရပါတယ်။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(အထက်ဗမာပြည်) သဘောထားကြေငြာချက်နဲ့ မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲ
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(အထက်ဗမာပြည်) တရားဝင်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီရဲ့ သဘောထားကြေငြာချက်နဲ့မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါ၇ီလ (၁)ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ ဓမ္မသဟာယကျောင်း၊မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ၊ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ နဲ့ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ပြည်သူလူထု ၃၀၀ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါ ကော်မတီကို ဇန်နဝါရီ(၁၀)ရက်နေ့က ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်(၉)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားထုရဲ့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ပေးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂကြီး တရားဝင် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mr.Ojea Quintana လာရောက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ဆုံ
ယနေ့ညနေ ၃း၃၀ နာရီတွင် အမှတ် (၅၄) တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်သို့ Mr.Ojea Quintana လာရောက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တစ်နာရီခန့်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်.....